Dhallinyar Ku-meelgaar ah - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xarunta Caafimaadka Habdhaqanka > Dhallinyartii Kala Guurka
Waxaan bixinaa taageero marka aad dhiseyso madax-bannaani iyo isku-filnaansho.
Kadib da'daada 18th dhalashada, kama sii heli kartid adeegyo isla nidaamyada daryeelka ee ku taageeray markaad carruurnimada ahayd. Sida dhalinyaro badan, waxaa laga yaabaa inaad ku dhibtooneysid inaad ku bilowdo nolosha dadka waaweyn.
Dhammaan xubnaha Qorshaha Caafimaadka Beesha Washington (CHPW) ee da'doodu u dhaxayso 15-25 waxay u qalmaan adeegyada Maamulka Kiiska Dhallinyarada (TAY). Dhallinyartii Kala Guurka waa dhalinyaro da'doodu u dhaxayso 15 iyo 25 kuwaas oo ka bixi doona adeegyada caafimaadka carruurta oo u wareegi doona adeegyada dadka waaweyn.
Maareeyayaasha Kiiska ee CHPW iyo Isuduwayaasha Daryeelka Bixiyaan tixraac bixiyeyaasha caafimaadka habdhaqanka ee leh barnaamijyo gaar ah oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyahaaga. Barnaamijyadan waxaa la abuuray iyadoo la tixgelinayo baahiyahaaga iyo marxaladda nolosha, waxaana lagaa dhisay agagaarkaaga shaqsi ahaan.
Adeegyada waxaa ka mid noqon kara:
Qiimeynta Xirfadaha Nolosha Casey (CLSA) iyo qorshaha
Caawinta helitaanka guriyeynta
Caawi abuuritaanka xiriiro xasiloon oo caafimaad leh
Maalgelinta (isku filnaanshaha iyo / ama helitaanka yoolalka nolosha ku meel gaarka ah)
Markay habboon tahay, Maamulaha Kiiskaaga ayaa kuu gudbin kara Barnaamijka Nolosha Kala-guurka ah ee loo maro Waaxda Gobolka Washington ee Carruurta, Dhallinyarada iyo Qoysaska (DCYF).
Si aad wax dheeraad ah uga ogaato Barnaamijka Nolosha Kala-guurka ah ee loo maro DCYF, booqo website.